Filtrer les éléments par date : vendredi, 01 juin 2018
vendredi, 01 juin 2018 11:11
Andramasina – Ambohimiadana: Amboarina ny lalana
Natomboka omaly alakamisy 31 may ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy an’Andramasina amin’Ambohimiadana. Haharitra roa volana eo ny asa, araka ny fanazavan’ny minisitry ny Asa Vaventy, Razafimandimby Eric.
vendredi, 01 juin 2018 11:07
Andilamena: Mitaraina ireo mpanisa vahoaka
Mitaraina ho tsy mbola nahazo vola sy tambim-piofanana ny mpanisa vahoaka aty Andilamena hatramin'izao.
Efa nampanantenaina ny hanomezana ny 40% tambinkarama mialoha ny hirosoana amin’ny fanisam-bahoaka sy ny tambim-piofanana ary misy koa ny vola hividianana fitaovana, saingy tsy mbola misy voaray ireo, hoy ireo mpanisa vahoaka.
Vokatr’io dia ny eto an-drenivohitry ny Distrika no mandeha ny fanisam-bahoaka fa ny any amin’ireo Kaominina lavitra kosa mihantona vokatr’io tsy fahazoam-bola io.
vendredi, 01 juin 2018 10:59
Antanifotsy - Soanierana Ivongo: Nopotehin’ny mpianatra ny lisea sy ny CEG
Itrangana savorovoro ao amin’ny lisea sy ny CEG Antanifotsy Soanierana Ivongo ny alarobia 30 may sy ny alakamisy 31 may 2018. Niitatra tamin’ny fanimbana fitaovana sy fanenjehana ireo mpitantana ny sekoly sy ny mpampianatra izany.
vendredi, 01 juin 2018 10:58
Antsiranana: Midina an-dalambe ireo mpampianatra
Nampiseho ny mpampianatra eto Antsiranana fa empaka kolikoly ataon'izao fitondrana izao.
Miala Rajao, hoy ny sorabaventy, mitohy ny tolona, hoy ireo mpanao fihetsiketsehana.
vendredi, 01 juin 2018 10:40
Hetsika ho an'ny fanovana
Indray hihetsika anio Anororo sy Tanambe Amparafaravola.